1937: Onye guzobere Ci Ji (Tzu Chi) mụrụ dị ka Wang Jinyun na Qinshui, Taizhong, Taiwan.
1938: E nyere Jinyun na ezinụlọ nna nna ya, bụ onye na-amụghị nwa n'oge ahụ.
1952: Mgbe nne Jinyun na-arịa ọrịa, Jinyun kwere nkwa ịghọ onye anaghị eri anụ wee nata mkpughe Bodhisattva Guan Yin.
1960: Nna Jinyun nwụrụ, o boro onwe ya ụta maka ịghazighị enyemaka ahụike ya.
1960: Jinyun nwere mmasị n'ụlọ nsọ Buddha dị n'ógbè ahụ, Ciyun Si, ebe ọ zutere Ven. Xiudao, wee malite ịtụgharị uche ịbụ onye nọn Buddha.
1961: Jinyun gbapụrụ n'ụlọ ya na Xiudao wee gaa Hualian, na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Taiwan, ebe ha nọrọ ọnụ afọ abụọ. E kpebiri Xiucan dị ka aha dharma ya.
1963: Iji kwado nhazi onwe ya, Xiucan gara nzukọ Buddhist nke Republic of China (nke Taiwan) (BAROC) maka mmemme a na-eme kwa afọ. N'ebe ahụ, ọ zutere nna ukwu Yinshun, onye kwetara ịbụ nna ya ukwu na-enye ya dharma-aha ọhụrụ, Zhengyan (Chengyen).
1966: Ciji Gong der hui (Buddhist ọmịiko na ntọala merit) tọrọ ntọala ya na ndị nọn ise na ndị nwunye iri atọ.
1987: Ebube aha nke Onye Nkwado onosọpụrụ (榮譽 ó róngyù dŏngshì) ka e webatara
1989: Isi nke mbụ nke Buddhist CiJi Foundation, USA, nke a maara dị ka Ci Ji USA, malitere na Alhambra, California.
1990: Mkpakọrịta nwoke CiJi, a na-akpọ Regiment of the Faith Corps (慈 誠 隊 cí-cén duì), bụ ntọala doro anya.
2008: Ndi CiJi nyere ndi isi oru ndi mmadu na ndi na-achoghi ahia ha (NPO) site na ndi mmadu nke Republic of China, dika ndi mbu (ndi ofesi) NPO China.
Gaa na Ciji Gongde Hiì 佛教教 濟濟 (The Buddhist Merit Society (nke a, Ci Ji ma ọ bụ, Tzu Chi)) tọrọ ntọala na 1966 n'ime obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Hualian 花 iri na Eastern Taiwan. Onye nchoputa bu onye ndi Buddha nke a na-acho Dharma Master Zhengyan (okwu ndi ozo: Chengyen). [Image na nri]
N'ime iri afọ anọ gara aga, Ci Ji mepụtara site na ọrụ ebere na-ahụ maka ịghọ òtù Buddha kachasị ukwuu na Taiwan, ọ na-ekwukwa na ọ bụ alaka ụlọ ọrụ iri na asaa na ndị òtù 10.000,000 (huù-yuan, onye nyere onyinye) n'ụwa niile. Otu ihe na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ na nso nso a bụ nchekwa gburugburu ebe obibi, nke dugara n'ụlọ ahụ banyere 5,000 recycling centers in Taiwan and abroad.
Aha aha Zhengyan bụ Wang Jinyun 王錦warin, nke ọdụdụ nke ụmụ nwanyị atọ. Nwanne di ya lụrụ di nabata ya, bụ onye n'oge ahụ enweghị nwa, ma emesịa nwee ụmụ anọ. Jinyun hapụrụ ụlọ akwụkwọ mgbe ụlọ akwụkwọ elementrị ga-enyere nna ya nwere nnabata aka, nke na-eme egwuregwu ndị na-eme egwuregwu.
Na 1952, nne ya na-ekwenye na-arịa ọrịa nke ukwuu, Jinyun kpere ekpere ka Guānyīn weghachi ahụ ike ya. O nyere iwu inye afọ iri na abụọ nke ndụ ya na ịghọ onye anaghị eri anụ ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ gwọrọ. Ruo abalị atọ, ọ na-enwe nrọ na-aga n'ihu, nke nne ya na-adabere na pallet n'ime obere ụlọ Buddha. Jinyun na-aga ịkwadebe ọgwụ ụfọdụ mgbe Guānyīn bịara ma nye ya ọgwụ, nke o nyere nne ya. Nwanyị nkuchi Jinyun mesịrị gbakee kpam kpam, Jinyun mekwara nkwa ya ịghọ onye anaghị eri anụ Buddha (Jones 1996: 364). Akụkọ a dị mkpa n'ihi ihe abụọ. Nke mbụ, Guānyīn ghọrọ akara ngosi nke Cí Jì. Nke abụọ, nrọ ahụ mesịrị mee ka Zhengyan chọta ụlọ nsọ na Hualian, nke Pumensi普明 寺), nke ọ choputara na nrọ. Isi ụlọ ọrụ ime mmụọ nke Movement, [Foto dị n'aka nri] "Ebe dị ọcha nke echiche" (精舍 ”Jingsi Jingshe), dị ihe dị ka mita iri atọ site na ụlọ nsọ ahụ.
Ihe omume mere Jinyun ịhapụ ụlọ mere na 1960. Nna nna nna Jinyun nwere ọrịa strok na ọfịs ya. Ọ kpọrọ ụgbọ ala iji kpọga ya n'ụlọ, ma ọ nwụrụ mgbe ọ bịarutere, e mesịakwa gwa ya na ọ ga-anwụ ma ọ bụrụ na ọ kpalighị ya. Obi jọgburu Jinyun na, na-achọ ịchọta ebe nna nna ya na-aga, ọ gara leta onye mmuo ime obodo. A gwara ya na papa ya nọ na Wăngsĭchéng (枉死 城). Na nkwenkwe omenala, nke a bụ ebe ndị nwụrụ anwụ na-anwụghị anwụ. O doro anya na okwu banyere nkọwa a bụ Jinyun, ọ bụ mgbe ahụ ka o wepụtara akwụkwọ nta Buddhist bụ nke ọ gụrụ: "Ihe ọ bụla a na-amụ mgbe a na-amụ ya ga-anwụkwa." E nwekwara akụkọ banyere uru a ga-enweta eme ememe nke nchegharị, ma Jinyun nwere ike mmụọ nsọ idebe omenala nna ya na temple Buddhist obodo, Ciyun Si. E nwere mmasị na Jinyun na Buddha ma malite ịga leta ụlọ nsọ ahụ mgbe niile. Otú ọ dị, ọ bụghị mmụọ nsọ site n'àgwà ọdịnala n'etiti ndị Buddha, bụ ndị kwadoro ọrụ ụlọ maka ụmụ nwanyị. O chere na ndụ ezinụlọ ekwesịghị ịbụ naanị ihe mgbaru ọsọ maka ụmụ nwanyị, ma na dị ka ndị nwoke, a ghaghị inye ha ohere iji jeere mkpa nke ndị mmadụ aka. O zoro ezo na nzuzo ịhapụ ụlọ ma ghọọ onye nọn Buddha. Na 1960, o buru ụzọ gbaga obere obere onyinye na Taibei (Taiwan), ma ụbọchị atọ ka nne ya kuchiri ya chọtara ya wee laghachi n'ụlọ.
Jinyun laghachiri n'ulo ma gaa n'ihu n'ulo temple a ma soro ndi nnoo nwee enyi, karia ya na Ven. Xiudao 修道 (1919-2016, bụ onye ọ bụghị naanị na ọ bụ ezigbo enyi na enyi, ma nyekwara ya mmụọ nsọ na mkpali. A kụziiri Xiudao na Japan, ọ kwadoghị ụfọdụ n'ime omume ndị dị na ụlọ nsọ Buddha ndị Taiwanese, bụ ndị dabere na ha na-akwado ego ha nwetara site na ọrụ ndị a sụgharịrị. Ọ na-ekwu na e nweghi iwu n'ime ụlọ nsọ nke ụlọ nsọ, nke ọ na-eche na ọ bụ ihe efu na-adabere na nsọpụrụ Buddha. O choro ka ụlọ nsọ Buddha ndị Taiwanese weghachite iwu nke 百丈 清 规 (Bai-zhang Qing-guei), usoro ihe omume Buddha nke ndị Buddha mara mma nke onye isi Buddhist bụ Baizhang Huaihai bu nke 丈 丈 (720-814) bu. Otu n'ime ụkpụrụ kachasị mkpa nke usoro ahụ bụ yīrì búzòo yīrì bùshí (一日 不做 一日 不 食 ụbọchị na-enweghị ọrụ bụ ụbọchị na-enweghị nri). N'ihe banyere Jinuda, echiche nke Xiudao na-etinye uche ya, na o kwere nkwa na ọ bụrụ na ọ ghọọ onye nọn, ọ ga-agbanwe ọnọdụ ahụ ma bulie ùgwù nke ndị ụkọchukwu Buddha. O kwekwara nkwa na ya ga-ebi na-enweghị ịnakwere nkwado sitere n'aka ndị nkịtị, na-agbaso ịdọ aka ná ntị na ụbọchị na-enweghị ọrụ bụ ụbọchị na-enweghị nri.
Jinyun mechara laa na Xiudao; O mechara kụọ onwe ya ma ghọọ onye Buddha, na-akpọ Xiucan. Otú ọ dị, ka a na-ewere na a na-eme ka a na-eme ya ka ọ bụrụ onye nzuzo na nke na-ezighị ezi, ugbu a, ọ ghaghị ịchọta nkwenye ziri ezi site n'aka onye Buddhist, bụ BAROC, iji nweta ọkwa ndị ọchịchị. Iji kwado nhazi onwe ya, o kpebiri ịchọta isi ụlọ ọrụ site na ịga na nsonye 1963 BAROC kwa afọ nke ga-eme Linji Si Akwukwo ime afo na Taibei. Okposụkedi emi ẹkedọhọde enye ke akpa mîdịghe mbon emi enye mîkọfiọkke, enye ama esịm Ven. Yhonshun 印順 法師 (1906-2005), onye isi Buddha a ma ama na onye ọkà mmụta a ma ama na Taiwan, bụ onye kwetara na ọ bụ onye nwe ụlọ na-enye ya Jinyun ọhụrụ, aha ya bụ Zhengyan 证 嚴. Ọ gbara ume, sị: "Mgbe nile, mee ihe niile maka Buddha, ihe niile maka ndị dị ndụ" (時時刻刻 為 佛教 为 眾生 shíshí kèkè wèi fōjičào, wèi zhòngshēng).
E kwuru na ihe abụọ mere ka ọ bụrụ na Zhengyan kwadoro ọrụ ebere Buddha. N'etiti 1960, ndị nọn Katọlik atọ (Order of Les Soeurs de St. Paul de Chartre) bịara ileta ya, na-enwe olileanya ịmegharị ya na Katọlik. Ọ bụ ezie na ndị nọn kwụsịrị ịgbalị ịmeghari, otu arụmụka mere mgbe ha gwara Zhengyan na ọtụtụ ndị na-ekpe okpukpe Buddha na-achọ ịkwadebe maka ndụ mgbe ha nwụsịrị ma ghara ime ihe ọ bụla iji dozie nsogbu nke ọha mmadụ. Ha na-ekwu na ọ dịghị Buddha bụ ndị wuru ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ dịka Ndị Kraịst mere. Mgbe Zhengyan lere anya na akụkọ banyere Buddha, ọ hụrụ aha Guānyīn, onye otu puku aka na puku anya nyere ya aka ịzọpụta ndị nkịtị site na nhụjuanya, ọ kwenyesiri ike na ndị Buddha kwesịrị ịrụ ọrụ ebere dịka ndị Katọlik.
Ihe ọzọ kpatara Zhengyan iji chọta ọrụ ebere bụ usoro nlekọta ahụ ike na Taiwan n'oge ahụ. Na 1966, ọ gara ileta otu n'ime ndị enyi ya n'ụlọ ọgwụ. Ka ọ na-apụ, ọ hụrụ ọdọ mmiri nke dị n'ala ma kọọrọ ya na o si n'aka otu nwanyị ogbenye na-akwụ ụgwọ nke nwụrụ anwụ. Ụlọ nwanyị dị ime buuru ya ihe dị ka elekere asatọ iji ruo n'ụlọ ọgwụ, mana a jụrụ ya maka ọgwụgwọ n'ihi na ezinụlọ ahụ enweghị ego iji kwụọ ụgwọ NNNXX NT (ihe dị ka euro 8,000). Nke a mere tupu iwebata usoro usoro ọdịmma mmadụ, mgbe ndị ọrịa na-akwụ ụgwọ maka ọgwụgwọ nke aka ha (Ụlọ Ahụike Ahụike Mba nabatara Taiwan na njedebe 200s). Ọ bụ ihe a na-emekarị maka ụlọ ọgwụ iji rịọ maka nkwụnye ego tupu ịmalite ọgwụgwọ, mana omume a dị nnọọ njọ nye ndị bi n'ógbè ndịda ọdịda anyanwụ nke Taiwan, bụ ebe Zhengyan dabeere. Zhengyan kwuru na a gaghị egbochi nlekọta ahụike n'ihi enweghị ego, nakwa na ọ bụ ihe na-enweghị isi ịhapụ ụdị omume ahụ hiere ụzọ.
Na March 24, 1966 (ọnwa n'ọnwa) bụ Zhengyan nke Buddhist na-ahụ maka ndị ebere Buddhist (Fōjiào Cíji Gōngdé Huì) na mmadụ iri atọ na-esote ya (俗家 弟子) na ndị mmụọ ozi ole na ole. Ebumnuche bụ inyere ndị ogbenye aka ma gosi na ndị Buddha nwere ike ịme ọrụ. Ọrụ mbụ bụ ịzụlite ego iji kwụọ ụgwọ maka ọgwụgwọ maka ndị na-enweghị ike imeli ya, ma ma ndị na-eso ụzọ ma ndị òtù na-agbaso otu ụkpụrụ ahụ. Ndị na-eso ụzọ biri na nkwụghachi ụgwọ nke ọrụ ha na-eme akpụkpọ ụkwụ, ọ dịkwa mkpa ka onye ọ bụla na-eso ụzọ mee otu akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ otu ụbọchị. A gbakọrọ na ebe ọ bụ na e nwere isii n'ime ha na akpụkpọ ụkwụ ọ bụla e rere maka NT $ 4 (nke a bụ 0.1 Euro ugbu a, ma ọnụ ahịa ya fọrọ nke nta ka afọ iri ise gara aga!), Ha nwere ike itinye NT $ 24 (0.8 euro) kwa ụbọchị na ngụkọta nke NT $ 8,640 (euro 234) kwa afọ, nke ga-eme ka ndị ọrụ ahụ kwụọ ụgwọ maka nkwụnye ego nke onye ọrịa. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-akwa iko bụ ndị nwunye, Zhengyan nyere onye nke ọ bụla ite ite ma gwa ha ka ha tinye pasent ise (0.025 euro) n'ime ya tupu ha apụ maka ịzụ ahịa nri ha kwa ụbọchị. Mkpụrụ okwu 'cents ise nwere ike ịzọpụta ndụ mmadụ' 五 毛錢 也 可以 救人 (wŭmáoqián yěkěyĭ jiùrén ') gbasaa ngwa ngwa n'ahịa ndị Hualian. Mgbe onye na-ekpechite ọnụ jụrụ ihe mere na ọ gaghị ekwe omume inye onyinye otu ugboro n'ọnwa karịa iji zọpụta obere ego kwa ụbọchị, Zhengyan zara na mkpa nke omume ahụ bụ na ọ bụ ihe ncheta mgbe nile banyere ọmịiko Buddha.
Tụkwasị na nke ahụ, laity aghaghị iji nkwa inye ndị ogbenye na ndị ọrịa onyinye afọ ofufo. Enyemaka ahụ bụ ma ihe ime mmụọ ma ihe onwunwe; ọ gụnyere nhicha ụlọ nke ndị ogbenye na-akpọrọ ha dọkịta ahụ. Zhengyan na-ezo aka na ndị a dorsi dị ka wěi-yuán (ndị isi ndị isi obodo), ka ha na-arụ ọrụ dị ka ndị ozi ala ọzọ nke afọ ofufo (Jones 1996: 337, na Círá Niánjiàn 慈包 年鑑 (Akwụkwọ Ci Ji, 1992-1996: 39). Ndị ọrụ ahụ na-akwalite ndị ọrụ ahụ ma jiri ịnụ ọkụ n'obi na-arịọ arịrịọ na ịgbasa ozi nke Cí Jì. N'ụzọ dị otú a ha wuru aha Zhengyan, na-agbasa ozi ọma: 'Nna anyị ukwu na-ewu ụlọ ọgwụ na Hualian' (我们 的 師父 要 在 花蓮 蓋 醫院 wŏmėn shīfa yàozài Hualian gài yīyuàn).
N'ịbụ ndị na-echegbu onwe ya banyere mmepe mmekọrịta nke ọha na eze nke Taiwan, na 1980s Zhengyan gbatakwara ihe mgbaru ọsọ nke usoro ahụ: ọrụ ọhụrụ bụ ịkụziri ndị ọgaranya (教 富 jiào-fù). Ọganihu akụ na ụba ewetawo nsogbu ọhụụ ọhụrụ, ka o kwuru; ọha mmadụ na-arịa ọrịa ma na-efunahụ ụkpụrụ ọdịnala ya; obi mmadu aghọwo ihe ojoo meriri. Ka Ci Ji nyere ndị bara ọgaranya aka n'ụzọ ime mmụọ nakwa iji zọpụta ndị ogbenye n'ụzọ anụ ahụ, a kpọpụtara otu òtù ndị ọhụrụ: Onye Na-asọpụrụ Onye Ọchịchị (譽董 董事 róngyù dŏsshì). A na-enye ndị a nyere onyinye ha na-aga na 1,000,000 NT dollar (ihe dịka puku iri abụọ na asaa). Na 1987, ka ọnụ ọgụgụ nke ndị òtù ahụ mụbara, Ndị Onye Nkwado Ndị Na-asọpụrụ Ha malitere òtù ha n'etiti Cí Jì. Mgbe ndị bara ọgaranya gụnyere, Ci Ji malitere ịbanye n'aka ndị mmadụ. Njikọ nwoke ahụ, nke a na-akpọ Regiment of the Faith Corps (慈 誠 隊 cí-cén duì ), tọrọ ntọala na May 1990.
Nnukwu ibu na 1990 na-enyere Ci Ji aka ịgbasa ozi ya site na ọrụ ebere iji tinye agụmakwụkwọ, nkà mmụta ọgwụ na omenala. Ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ ahụ mepụtara ọtụtụ obi ụtọ na inweta ego na-arịwanye elu. Mgbe ụlọ ọgwụ ahụ gwụchara na 1986, Zhengyan nwere obi ike na ọ rịọrọ maka inyekwu onyinye iji gbasaa ya. Ụlọ ọgwụ Ci Ji dị otú ahụ ghọọ ụlọ ọgwụ kasị ukwuu na East nke Taiwan, na akwa 900. Zhengyan kwenyere na ụlọ akwụkwọ kọleji na ụkpụrụ omume okpukpe ga-eweta ndị dọkịta na ndị nọọsụ ka mma, Ci Ji malitere ịzụlite ego iji wulite ụlọ akwụkwọ nọọsụ na ụlọ ọgwụ. Klas nke Nursing College nke dị na 1989, Ciji Huli Zhuānode Xuéxiào, e mechara na 1994, Ụlọ Akwụkwọ Medical College, bụ Cíji YīxuéYuàn, malitere ịmalite ụmụ akwụkwọ na 1991. Taa, Ci Ji na-elekọta ụlọ ọgwụ ise, otu mahadum dị na Taiwan, na ngalaba alaka iri asaa na anọ, gụnyere US na China. Ogologo ọrụ ọrụ ebere nke Cí Jì gbasaa mgbe oge a gasịrị wee ghọọ ọkachamara. Ci Ji na-arụ ọrụ enyemaka na mba ọzọ, gụnyere ọrụ enyemaka na-akpata ọgba aghara na China na XNUMX, yana ịmekọrịta ọrụ nkwado mmekọrịta. N'anya ndị ọha na eze, Ci Ji dị ka ụlọ ọrụ ọha na eze, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ maka ọdịmma ọha na eze.
Ci Ji bụ ọkachamara n'ịchọpụta ndị na-ahụ maka mgbasa ozi dị egwu, dị ka Gāo Xìn-jiāng (高 信 疆 1944-2009), otu n'ime ihe ndị a ma ama na mgbasa ozi Taiwanese. Gāo na-akwalite Nna-ukwu Zhengyan n'ime akwụkwọ akụkọ ahụ ma nyere aka dezie akwụkwọ mbụ ya, na-agbakọta site na okwu ya. Nke a bụ N'agbanyeghị nke a, nke ghọworo otu n'ime ihe odide kachasị mkpa nke Zhengyan. Mgbe o guzobere ọwa abụọ TV, Dà Ài TV 大 愛 電視, onyinye ndị ahụ na-abịa, ọrụ ndị ahụ gbasaa ma mụbaa. Dịka ọmụmaatụ, ije ahụ tọrọ ntọala ọkpụkpụ ọkpụkpụ na 1993. Ruo 2011, ihe dị ka narị puku mmadụ atọ na-edebanye aha ha ọbara na Movement. Ihe omuma atu ozo bu inye ozu mmadu maka nzube ahuike, "Mentors Silent."
Zhengyan kwupụtara na ọdịnala ya na-agbaso nsụgharị Buddhist nke oge a, "Buddha ndị mmadụ na-akwado" 人间 佛教 Zhénjiān Fójiào), nke malitere na oge mbụ nke mba ndị ọchịchị na ọtụtụ ndị Buddhist gbara ọsọ ndụ na Taiwan mgbe ndị ọchịchị na-achị na China. Ọtụtụ ndị Buddha dị na Taiwan na-azọrọ na ha so n'òtù Zhénjiān Fójiào. Cí Jì ewerewo ozizi na omume ọbụna n'ihu. Dika onye Buddhist dinara, Cí Jì mere ka o doo anya, obu ezie na Zhengyan onwe ya nwere ike ghara ima nke a ma o bu na o choghi ka o di otua, na ozizi ya na ukpuru ya bu ndi ego, ma apuru ihu n'uzo ufodu ịbịaru nso na Buddha ndị Japan karịa nke ibe ya.
Zhengyan na-akụzi onwe ya, a na-akpọkwa mpịakọta abụọ ya Echiche niile :, Otu na abụọ (静思 語 Jìnsī Yŭ, ugbu a TST M, TST II), bụ ndị ahịa kacha mma na Taiwan ruo ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ narị ndị isi na ndị nkụzi nke abụọ ejikwala akwụkwọ dị iche iche maka ịkụziri ndị mmadụ ụkpụrụ; n'ihi ya, a ghọtara ya dịka Mother Theresa nke Taiwan.
Echiche Buddha nke karma (ndụ) bụ isi maka ozizi Zhengyan. Ọ na-ekwusi ike na ọnọdụ ahụ dị ugbu a, nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ, bụ karma. A na-akwakọba Karma ruo ọtụtụ oge, na-ewuli ihe ndị na-emekarị ka àgwà na ọnọdụ dị ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, Zhengyan na-ede, sị, "Anyị na-ahụkarị ụdị mmadụ abụọ, ndị na-eme amara ma dị mma n'ebe ndị ọzọ nọ, na ndị na-achịkwa na obi ọjọọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Otú ọ dị, ndị ọgbọ mbụ ahụ nwere ndụ siri ike karịa nke ikpeazụ. Ntak-a? Ọ bụ n'ihi mkpebi karmic mere na ndụ ha gara aga (TSTII: 233). "Dịka Zhengyan si kwuo, mmetụta nke karma na-egosikwa akụ na ụba ndị dị ugbu a, ahụike, na ọbụna mmekọrịta mmekọrịta; dịka ọmụmaatụ, a na-ewere na ịlụ di ma ọ bụ nwunye na-eme ka ọ bụrụ ihe si na karma karma nke nwunye. Na mkparịta ụka, Zhengyan gwara onye na-eso ụzọ nwanyị: "Akpọla ya otu ihe. I kwesiri ile ya anya dika ohere. Ọ bụ akụkụ nke karma gị. Ikwesiri ịnakwere ya n'atụghị egwu. I kwesiri inwe obi ekele nye di gi maka inye gi ohere a [na ihe isi ike nke ndu] "(TSTII: 164-65).
Zhengyan na-ekwu na agbanyeghị na enweghị ike izere ụfọdụ nsonaazụ kama, enwere ike belata ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ga-enwe ihe ọghọm ma gbuo ya ma ọ bụ wakpo ya, otu ụzọ isi mee ka nsonaazụ ahụ jọkarịrị njọ bụ site na imeziwanye omume. O kwuru, sị: “You ghaghị ịzụlite omume ọma iji zere ọdachi…. Nwere ike ime ka akụnụba gị baa ụba site na igosipụta ịdị nwayọ na ịhụnanya n'ebe ndị ọzọ nọ ”(TSTII: 234-37).
Zhengyan na-ekwusi ike na mkpa karma kariri (共 業 gòngyè). Ọ na-ekwu, sị, "Ugbu a ka a mụrụ anyị n'ime ụwa a, enweghi ike ịhapụ anyị na karma na otu agbụrụ. Anyị enweghị ike ịhapụ ìgwè ahụ iji zochie ụwa na omume anyị. Enwere ezi nnwere onwe ma nweta ma ọbụbụenyi anyị na ndị ọzọ na n'etiti ịhụnanya "(TSTI: 8). Dabere na Zhèng Yán, ọha bụ, ya mere, ọha mmadụ bụ akụkụ dị oke mkpa nke ọganihu mmadụ n'otu n'otu iji nweta ihe ọmụma. Ọ gara n'ihu: "… ọ bụrụ na anyị gbanahụ eziokwu wee zonahụ ndị mmadụ na ihe omume, ọ ga-esiri anyị ike inweta amamihe" (TSTI: 25).
Zhengyan na-atụ aro na àgwà dị elu bụ ihe ngwọta ọzọ iji dozie karma. Dịka ya si kwuo, Buddha gosipụtara okpukpe ya na ụwa maka ịzọpụta ihe ndị ọzọ dị ndụ (TSTII: 206). Ọ na-ekwu na ịchọ ọdịmma onwe onye bụ ihe dị mkpa maka ịghọ Buddha. Isi ihe nke Ci Ji bụ: xiániri shànmén zàirù fómén (ị ga-ebu ụzọ banye n'ọnụ ụzọ ámá obiọma, tupu ị banye n'ọnụ ụzọ Buddha).
Ọ bụghị naanị na Altruism na-ewepụ kama kama ọ na -emepụta kama kama. Zhengyan na-ekwu, “Kedu ka mmadụ ga-esi lọghachi na Western World of Perfect Happiness (echiche Buddhist banyere mpaghara eluigwe nke a kụziri ịdị adị karịa ụwa a)? Ikwesiri inwe mkpebi siri ike iji nyere ndị ọzọ aka, zụlite obiọma, na akụnụba iji ruo ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ikwesiri itinye ezi echiche gị n'ọrụ site na ịme ihe…. Anyị enweghị ike iru ebe anyị na-aga ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme ezi ọrụ ”(TSTII: 258).
Zhngyan na-ekwusi ike na ọ bụ naanị mgbe a na-etinye ya n'ọrụ (做 zuò). Ọ bụ ihe na-abaghị uru inwe ezi ebumnuche, ma ghara itinye ha n'ọrụ. Fú (nka, uba, ma ọ bụ ngọzi) bụ ihe ọzọ dị mkpa gbasara ya. Ọ bụ ezie na fú yiri kama karma, ebe ha abụọ ketara, fú bụ oge onwunwe; dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịsị na ụfọdụ ndị bara ọgaranya ma ndị ọzọ dara ogbenye n'ihi na ndị ọgaranya achọọla ma ndị ogbenye adịghị. Nna-ukwu Zhengyan dọrọ ndị ọgaranya aka ná ntị ka ha ghara inwe obi ụtọ na ha, ma ọ bụghị ego ha ga-efu. Iji kọwaa nkọwa ya banyere fú, Zhengyan na-agba ndị mmadụ ume ka ha zhīfú (知 福 ghọta fú), ka xífú (惜福 appreciate fú), na nke ukwu (造ka mepụtara fú). Ebumnuche Zhengyan bụ iji gbaa ndị mmadụ ume ịzụlite onwe ha ma ghọta na, ọ bụrụ na mmadụ agbasi mbọ ike, otu ga-enweta ọganihu dị ukwuu ọ bụghị nanị na ndụ mgbe ọ nwụsịrị kamakwa na nke a. Nke ahụ bụ ozizi ya nke zhífú (植 福 na-akụ mkpụrụ nke ezi ego). Ya mere, "ndị ogbenye nwere ihe ga-eme ka ha ghara ịda ogbenye, ebe ndị ọgaranya chọrọ ịba ọgaranya" (TSTI: 74).
Otu ụzọ zhífú bụ site na ịnọgide na-enwe nkwekọrịta nke ọha mmadụ. Zhengyan na-ekwu akụkọ na-esonụ:
Otutu ndi mmadu ndi mmadu no n'ime ha bi na ndi agha iri ise. Mgbe ọ dị ndụ, ọ na-agbasi mbọ ike nye onwe ya na ndị ọzọ. Ọ dịghị mgbe ọ lụrụ di n'ihi na o chere na nwunye na ụmụaka dị oke ọnụ, ọ na-akpọrọ ụmụnne ya n'ụlọikpe maka esemokwu ụlọ obere. Mgbe ọ dara ọrịa, kama ịhụ ndị dọkịta na ụlọ ọgwụ, ọ gara hụ onye na-enye ọgwụ. Ọ nwụrụ na-eyi naanị uwe ya, ebe ọ na-enweghị ohere itinye uwe ọ bụla. N'ikpeazụ, akụ ya gara ụmụnne ya, bụ ndị na-alụ agha n'enweghị ihe mgbochi. Nna-ukwu Zhengyan na-ekwukarị banyere ndị dị otú ahụ: nwoke a bara ọgaranya bụ onye na-ahụju anya ka ọ na-ejighị onyinye akụnụba (福 因 fúyin) mee ka ọha mmadụ. Ọ bụrụ na o meela otú a, ọ ga-enwetakarị ùgwù (Ịlbe gōngdé) mgbe ọ nwụrụ (TSTII: 258).
Cí Jì mepụtara ụzọ pụrụ iche maka nzọpụta, nke a na-akpọ xíngjīng 行經 (na-eme ihe dịka ozizi Buddha). Ọ na-eduga n'ahịrị na-eme ka mmadụ nwee ike ịba uru na ịchọrọ ịghọ bodhisattva. Guānyīn bụ onye onye Zhengyan si na ya nweta ọkwá ya na ike ime mmụọ ya. Na Mahāyāna Buddhist Guānyīn bụ ihe na-egosi ọmịiko (eg 慈悲). Zhengyan na-akụzi na Guānyīn nwere mmekọrịta chiri anya na ụwa dị ndụ. Dika omenala Buddha, Guānyīn enwewo ikike siri ike maka ọmịiko; ọ na-ege ntị ná mkpu arịrị nke ihe ndị dị ndụ ma napụ ha ahụhụ ha. Ọdịdị na-enweghị mmerụ nke Guānyī bụ ihe mere Zhengyan ji enwe mmetụta dị egwu ya. Zhengyan kwere nkwa itinye mmụọ ọmịiko nke Guānyn na ụwa a.
Echiche ọmịiko nke Guānyīn bụ ozizi ozizi bụ isi nke Zhengyan; ọ bụ na ị na-agbanye ọsọ ọsọ (ịga ije n'okporo ụzọ nke bodhisattva). Onye ọ bụla ga-azụlite obi ọmịiko ha na ikike ha nwere inyere ndị nọ ná mkpa aka. Zhengyan na-ele bùshī 布施 (onyinye inye ebere) dị ka ihe kachasị mma: "Ego abụghị akụkụ dị mkpa nke onwe anyị; ya mere, n'eziokwu, a ghaghị inwe oge mgbe anyị nwetara ma ọ bụ tụfuo ya. N'ihi ya, ọ dịghị mkpa inwe nganga maka akụ na ụba ma ọ bụ na-eru uju maka ịda ogbenye "(TSTI: 59). Zhengyan na-ekwusi ike na n'oge ọnwụ, ọ dịghị onye nwere ike iji akụ na ụba ya. Zhengyan na-ekwu na onyinye otu onye na-arụ ọrụ ga-abụ ụzọ n'ụzọ anọ nke ego onye ọ bụla; ndị nne na nna, ezinụlọ na ụmụ akwụkwọ ga-enweta otu ụzọ n'ụzọ anọ "(TSTI: 59). Inye ima (udi) bu kwa ihe di nma.
Zhengyan na-ekwu na ọrịa bụ isi ihe kpatara ịda ogbenye nakwa na ụlọ ọgwụ bụ ebe kachasị mma iji hụ ezughị okè na nhụjuanya nke ọnọdụ ụmụ mmadụ. A na-asọpụrụ Buddha dịka Ọgwụ Nkà Ọgwụ Eze (Dà yīwáng 大 醫王). Otu nnukwu fresco na nnukwu mgbidi nke ụlọ ọrụ Cí Jì Main Hospital na Hualian na-egosi Buddha n'àkwà onye ọrịa, na-agwọ ya. Ya mere, Zhengyan gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha rụọ ọrụ dịka ndị ọrụ afọ ofufo na ụlọ ọgwụ Cí Jì (TSTII:206).
Ụkpụrụ ndị bụ isi ndị òtù Cí Jì nwere ịhụ ka a na-akpọ Iwu Iri ahụ: (1) ka ị ghara igbu onye ọ bụla bụ 不 殺生; (2) ka ị ghara izuru ohi 不 偷盜; (3) ịghara itinye aka n'omume rụrụ arụ 不 邪淫; (4) ịghara ikwu okwu na-ezighị ezi 不 妄語; (5) ka ị ghara ịṅụ mmanya 不 飲酒; (6) ka ị ghara ịṅụ sịga ma ọ bụ chew betel nut 不 抽煙 吸毒 嚼 檳榔; (7) ka ị ghara ịgba chaa chaa, nke gụnyere igwu egwu na itinye aka n'ahịa ahịa 不 賭博 投機取巧; (8) na-agbaso ọchịchọ nne na nna ma nwee ekele maka ha 孝順 父母 調和 聲色; (9) ka ị ghara imebi iwu okporo ụzọ 遵守 交通曼 na; (10) ka ị ghara itinye aka na ngosipụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mmegide gọọmentị 不 參加 政治 活動 示威 遊行. Nchịkọta 6, 9 na 10 nọ n'ebe ahụ iji gboo mkpa nke ndị Taiwanese nke oge a na ime ka ndị òtù ahụ nwekwuo ọganihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Iwu ndị ọzọ bụ ụkpụrụ bụ isi nke okpukpe Buddha; dịka ọmụmaatụ, iwu ahụ megide omume rụrụ arụ na-achọ iji belata mmekọahụ rụrụ arụ jupụtara n'etiti ndị nwoke Taiwan oge a.
Zhengyan na-ekwusa na ozizi Buddha abụghị naanị banyere otu a ga-esi hapụ oge ọmụmụ na ọnwụ, kamakwa banyere otu esi anabata ndị ọzọ ma zere esemokwu. Okpukpe Buddha omenala na-akwado echiche nke njedebe site na ụkpụrụ ụwa, gụnyere mmekọrịta ụmụ mmadụ. N'ụzọ dị iche, nkuzi nke Zhengyan na-etinye uche dị ukwuu na itinye aka na ụwa, karịsịa na ime ka mmekọrịta na ndị ọzọ dịkwuo mma.
Zhengyan na-ahụ ọnwu dịka "nlọ ụwa" ma kpọọ ya ụta nke ndị mba ọzọ (nlọghachi). Mgbe ọnwụ na-eme, mmụọ nsọ ga-ahapụ ahụ ma gaa na hel (ụwa) ma ọ bụ n'eluigwe (天堂). N'ime ụbọchị iri anọ na itoolu nke ọnwụ, mmụọ (hey) ga-abanyeghachi na nlọghachi nke ịlọ ụwa (ụda agha) dị ka karma gbakọtara). A ga-abanye onye nke nwere ezi karma (ma obu ya) ma oburu na onye nwere karma kariri (ogologo oge) adighi anya. Mgbe nke a gasịrị, mmekọrịta dị n'etiti onye ahụ nwụrụ anwụ na onye òtù ọlụlụ ya ga-agwụ. N'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ịnọgide na-enwe njikọ ọ bụla dị n'etiti onye ahụ nwụrụ anwụ na ndị ikwu ya na-anwụ anwụ, ha anaghịkwa eso karma karma mgbe ụbọchị iri anọ na itoolu gasịrị. N'adịghị ka ọdịnala omenala, na Zhengyan, ndị nna nna agaghị enwe mmetụta n'ahụ ụmụ ha dị ndụ n'oge a.
Na nkuzi Cí Jì, a kpọtụghị aha maka inyefe nna nna nwụrụ anwụ ma ọ bụ ndị ikwu gara aga. N'ịza ajụjụ banyere onye na-etinye aka n'ihe gbasara ememe ncheta maka nna nna nwụrụ anwụ, Zhengyan kwuru, sị, "I kwesiri iji obi eziokwu mee ihe maka ndị nwụrụ anwụ. Mgbe ahụ, a ga-agọzi ma onye na-eme ya ma ndị nwụrụ anwụ: onye ọrụ ahụ ga-enweta ụgwọ ọrụ maka omume ọjọọ, mgbe onye ahụ nwụrụ anwụ ga-enye onyinye na ụwa site na-akpali gị ịghọ Buddha "(TSTI: 267-68). A pụrụ ịhụ ya na ihe a na-emesi ike bụ ọrụ maka ndị dị ndụ, ọ bụghị maka ndị nna ochie nwụrụ anwụ.
Ozizi banyere mmekọrịta na-adịte aka n'etiti onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ga-ekwupụta na nzoputa nile nke onye ọ bụla dabeere na omume nke omume achọghị ọdịmma onwe onye nanị maka ndị ọzọ. Ndị a bụ echiche Buddha karịa ozizi ndị omenala Chinese. Cí Jì na-ele ọbụna mmekọrịta dị n'etiti ụmụaka na ndị nne na nna anya dịka nwa oge.
N'ihi ya, ndị Ci Ji na-ebu ibu ọrụ ọ bụla maka omume ha, bụ nke a na-edekarị n'usoro iwu, ọ bụghị n'ememe. Ya mere, ha achọghị ụdị omume ọ bụla nke na-egosipụta ihe omume okpukpe ha site na ndụ ha kwa ụbọchị, ọ dịkwa mkpa na ha ghọtara ihe ihe ndị ndú ha na ndị okpukpe ibe ha na-agwa ha.
Ndị Buddha bụ ndị banyere Taiwan si n'ala ala ahụ egosipụtaghị mmasị ma ọ bụ nchegbu maka ọdịbendị obodo Taiwan. Asụsụ nke Taiwan bụ ụdị Chinese nke a na-akpọ Hokkien (Fúlǎohuà 福佬), nke na-adịghị ejikọta ya na asụsụ Chinese na ala. Okpukpe Buddha si na kọntinent ahụ nọgidere na-eji Mandarin Chinese eme ihe maka okwu ya na okwuchukwu ya bụ ihe dị n'ozuzu ya. Zhengyan na-eji Hokkien mee ihe, na-eme ka Ci Ji dị iche iche Taiwanese, nke na-adọta ndị nwere omenala obodo ma ọ bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu n'ime "Iwu Iri" (iri abụọ na Shí Ji'u) na ndị òtù ahụ ga-erube isi na ha agaghị etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla. N'ihi ya, ọkpụkpụ ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; Otú ọ dị, àgwà ya dị mma nke Taiwan ga-enyere ya aka ito eto.
A na-eji abode (静思 精舍 jìngshī jīnshè) kọwaa isi ụlọ ọrụ na Hualian, [Foto dị n'akụkụ aka nri] nke dabeere na Nna-ukwu dịrị ndụ kemgbe ọ malitere ya. Abode anaghị eme ememe ọ bụla maka omenala Buddha ọdịnala; Otú o sina dị, ụbọchị ọmụmụ nke Buddha (佛誕 日 fōdànzì) aghọwo nnukwu ihe ngosi maka Ci Ji. Naanị Abode na-arụ ọrụ ụtụtụ, na-abụ abụ otu ugboro n'ọnwa nke a Sutra na-agwọ ọrịa (藥師 經 Yasoshī Jīn) na-agụghachi; nke a na-eme nke a site na ndị na-eso ụzọ edozi. E jiri ya tụnyere ndị mọnk Buddha ndị ọzọ na ụlọ nsọ dị na Taiwan, ọrụ okpukpe na Abode dị obere ma bụrụ ndị na-adịghị mkpa na ndụ okpukpe.
Zăokè 早 課 (ọrụ ụtụtụ) na-agbaso ụdị ọkọlọtọ nke ọtụtụ ụlọ Buddhist dị na Taiwan. Ihe dị mkpa ebe a bụ na Zhengyan na-eduzi ya. N'ọtụtụ ụlọ nsọ nke Taiwan, isi agaghị achịkwa ụdị ọrụ a. Ọrụ ụtụtụ amalite na 4 AM ma gwụchaa na 6 AM. A naghị eme mkpọtụ na okwu na Mandarin, asụsụ asụsụ Taiwan, kama na Hokkien, asụsụ nke ọtụtụ ndị Taiwanese kwuru.
Ndị a haziri ahazi (出家 眾) bi na Abode na-ebute ụzọ kachasị mkpa ná mmalite nke ọrụ ahụ. Ọ na-amalite site n'ịkpọ abụ Lotus Sūtra (otu ụbọchị). Ọgbakọ na-anọdụ ala n'elu ụkwụ; mgbe ụfọdụ, ha ga-ebili ọtọ ma ọ bụ gbuo ikpere ala, dịka ntuziaka dị na ndị nchịkọta n'elu n'elu isi ha. Mgbe ị na-abụ abụ, enwere ntụgharị uche nkeji iri abụọ na ise (静坐); a gwara ndị mmadụ ka ha mechie anya ha. Ugbu a ọkụ ọkụ na ụda niile agbanyụrụ, na-agbanwe ebe ahụ kpamkpam na ọchịchịrị. Na njedebe nke ntụgharị uche a na-enwu ọkụ ọkụ na-enwu gbaa n'ihu na ihe na-akpụ akpụ na-esite na azụ. Ọ bụ Zhengyan, onye na-agbada onwe ya n'ihu ebe ịchụàjà (佛.). Mgbe o mechachara, ọ na-eche ihu na ndị na-ege ntị ma na-anọdụ na ọdụ. Mgbe ahụ, ọ ga - etite nkpu olu ya site na igwe okwu. N'okpuru ọkụ ọkụ, Zhengyan na-amalite okwu ụtụtụ ya (開 示) nke minit iri atọ.
Okwu a na-abụkarị ihe na-akpali ndị na-ege ntị, bụ nke ọ na-ewere ihe atụ nke ndị na-ata ahụhụ, dịka ọmụmaatụ na ala ọma jijiji. Ọ na-amalitekarị na isiokwu ndị dị ka ihu igwe ma na-eduga na akaụntụ nke ọdachi ndị mere n'oge na-adịbeghị anya n'ebe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ dị ugbu a. Zhengyan ga-eji ihe omume ndị a mee ka ebumnuche na ebumnuche nke njem ahụ na ebumnuche ya sie ike, na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume "na ugbu a bụ ohere iji nweta uru maka ọdịnihu… Ihe ị ga-enweta n'ọdịnihu dabere na mbọ ị na-eme n'oge a ”(TSTII: 179). Ndị na-ata ahụhụ site na ọdachi ndị a na-egosipụta oké ọmịiko na mgbe ọ na-enwe mmetụta nke ukwuu na olu ya na-ama jijiji. Nke a na-enwekarị mmetụta n'ahụ ndị na-ege ntị, ọtụtụ n'ime ha na-amalite ịkwa ákwá. Okwu a ga-ejedebe site n'ịmata ndị na-eso ya (ụtụtụ) n'ehihie ụtụtụ: "Ọ bụrụ na ị nweghị obi ebere ma na-akwado, ọ gaghị ekwe omume ịmegharị taa ... Ka anyị dị mma ka ụbọchị ọhụrụ ọzọ na-amalite!"
Dika o kwesiri inye ebere, itinye aka n'omume bu site n'inye onyinye mgbe nile na oru kachasi nke ndi otu bu ego. N'ime iri afọ anọ gara aga, Ci Ji kwadoro onwe ya na mba ụwa, dị ka ihe na-agafe ihe karịrị puku mmadụ iri asatọ na-enye onwe ha n'afọ ofufo, ihe dịka ụzọ n'ụzọ atọ n'ime ha inyom, bụ ndị mere ka nde mmadụ nyere nkwado maka mgbasa ozi ya site na ime onyinye ego kwa ọnwa. Ci Ji kwadoro onwe ya na nghọta ego ya.
Na Chinese, ihe odide cí 慈 na u Obere ala bu 'ọmiko' na 'enyemaka', karia ihe ndi mara nke bodhisattva Guānyīn 觀音. Zhengyan abụwo onye na-etinye ndụ na Guānyīn oge nile, ndị na-eso ụzọ ya weere ya dịka ọdịdị nke àgwà ndị ahụ. Ụdị njirimara Cí Jì bụ:
nkwenye siri ike banyere ụkpụrụ omume, dịka megide ntụgharị uche, liturgy, nkà ihe ọmụma na gnosis; nke a na-enwe nchegbu banyere ihe omume ụwa a. Ya mere, ndi otu a na-ahuta ihe di oke mkpa.
ọ bụ ụda ije. Zhengyan emeela onwe ya ka ọ bụrụ onye nọn Buddha, n'agbanyeghị na ejiji ejiji. O nyewo ụfọdụ ndị nọn, ma ọ dịghị ndị mọnk, na ọnọdụ nke ndị nọn ndị ọzọ karịa Zhengyan n'onwe ya bụ ndị nkịtị; nkwonkwo a na-arụ na-akwadoghị.
Isi iwu Cí Jì bụ na ndị òtù ga - abụ ndị ọrụ afọ ofufo (志工 zhìgōng) na ịrịọ ego maka onyinye iji kwụọ ụgwọ ọrụ ya. Iwu a na-achọ onye ọ bụla nọ na Ci Ji, karịsịa ndị ọrụ "ọrụ" (wèiyuăn), iji nweta ma ọ dịkarịa ala mmadụ iri atọ na-enye onyinye (huuyuán) iji nye onyinye onyinye kwa ọnwa. Zhengyan na-emesi ike mmụta nke Buddha site na ọrụ dị irè, ọ na-ezere usoro mmụta ma ọ bụ ọgụgụ isi. Nke a bụ otu n'ime ozizi ya banyere zòu zhōng xué 做 中學 (mụta ihe mgbe ọ na-eme ihe), n'ihi na site na ime niman (ime ka ndị mmadụ nye onyinye).
N'agbanyeghi ọdịdị onye mmadụ na mpaghara nke Ci Ji na mpaghara ha, ndị òtù ahụ gosipụtara ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịga nzukọ nzukọ na ihe omume, ihe karịrị pasent iri anọ nke ha na-abịa ma ọ dịkarịa ala ugboro anọ n'ọnwa na nke ise na-abịa alaka ụlọ ọrụ ugboro abụọ n'izu. Ọtụtụ n'ime ha na-etinye aka na ego ha nakọtara. Mpaghara kachasị mma nke alaka ụlọ ọrụ Cí Jì's Táiběi bụ ọtụtụ kọmputa na ndị ọrụ na-edebe ihe ndekọ ziri ezi nke onyinye onyinye nke onye ọ bụla. N'aka nke ya, onye ọ bụla nọ na Cí Jì, karịsịa onye ọrụ ahụ nwere akwụkwọ ndekọ ụlọ ọrụ iji tinye aka onyinye ha zụlitere maka njem ahụ ma nye ndị na-enye onyinye. E nwere ihe nnọchianya doro anya na ndị nọ na Ci Ji na-edekọ akụkọ banyere ọrụ ha.
Dharma Master Zhengyan ka na-eduzi usoro ahụ, ọ bụkwa ya nweghị ikike ọ bụla. N'adịghị ka onye ndú na-eduzi ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ndị nduzi nke Movement bụ ihe ndị ọzọ na-adabere.
Nna-ukwu Zhengyan bụ ndị òtù Ci Ji kpọrọ changren ("nwoke kachasị elu"). Okwu okwu a maka onye isi okpukpe Buddha bụ, ọ dị, ejiji ọhụrụ taa Taiwan. A na-ewere Zhengyan dịka onyeisi nke ezinụlọ na ndị òtù na-ahụ onwe ha dị ka ụmụ ya: n'ime uche ndị òtù Zhengyan na-eme dị ka nne nwere obiọma.
Nna-ukwu Zhengyan bụ naanị onye nọ na Ci Ji Movement nke ndị òtù ya na-enweta ike ha. Ọ bụ onye isi oche nke Movement, onye nlekọta na-ahụ maka ndị a họpụtara ahọpụta na Abbess nke Abode. Ọ bụ akara ngosi maka ndị Ci Ji niile. A na-ahụ ihe osise nke Master Zhengyan n'ụlọ ọ bụla. Ụfọdụ na-edebe otu n'ime uwe mpempe akwụkwọ ha; ọtụtụ na-etinye foto ya n'elu ebe ịchụàjà ezinụlọ. Ha na-ekwu ma ọ bụ na-ekpegara ya akara ngosi banyere ihe isi ike ha. Ha na enwe mmetụta na ya na ya site n'ige ntị n'ihe ndekọ ya ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ ya, ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịhụ ya n'onwe ha. Ndị Ji Ji na-emeso Master Zhengyan dịka onye nzọpụta ha. A na-arara ọtụtụ abụ nye ya iji kwanyere ya ùgwù, dị ka abụ Zhiqian nide shou ("Ka ijide naanị aka [Master Zhengyan]").
E wezụga na Abode na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na Hualian, Ci Ji eguzobewo alaka na njikọta (alaka ụlọ) gafee Taiwan na n'èzí; a na-ewere ha dị ka ụlọ ọrụ Ci Ji. Nhazi nke alaka ndị a bụ nanị iji jee ozi nlekọta.
Ọdịdị nke nzukọ Ci Ji bụ nkeonwe na netwọk dabere; ọ na-ebute ya site na nwanyị site n'afọ ofufo, mgbe ahụ, ndị mmadụ na-eji nwayọọ nwayọọ dochie anya ma ọ bụrụ na Ci Ji achọta ndị na-eme nke ọma. Mgbe ọchịchọ siri ike maka ebe ga-adịgide adịgide, a na-eme njikọ. Otu lianluochu (mmekọrịta ndị agha) bụ otu ìgwè nke ndị òtù na-agụta ihe ọ bụla site na narị abụọ na njedebe nke ihe dị ka iri. Ọ na-adabere mgbe ọ bụla onye ọ bụla nwere ike inye ebe obibi maka njem ahụ. Dika ọ ga-abụ n'ụlọ onye otu onye ndú.
A na-enwe fenhui (alaka ụlọ ọrụ 分會) ma ọ bụrụ na ọnọdụ abụọ ezutere: na e nwere ọnụ ọgụgụ zuru oke, ọ dịkwa ebe a na-adịgide adịgide maka iji otu Onye njem. Mgbe ahụ, a na-enye ya ikike ijide ememe ntọala, a na-enyekwa ọkọlọtọ alaka ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enye ya nkwado iwu dịka mpaghara nke Ci Ji. Alaka ahụ bụ mpaghara mpaghara na mpaghara mpaghara dị n'okpuru ya. A na-enyekarị ma ọ bụ zụọ saịtị na ọnụ ala dị ala. Alaka Taipei bụ alaka kachasị ukwuu nke Ci Ji. Ihe owuwu ya yiri ụlọ nke oge a karịa ụlọ nsọ ọdịnala.
Ndị ọrụ nke alaka Taipei, bụ ndị ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ agbọghọ, ga-anọ mgbe a na-enwe nzukọ na alaka ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na a na-ahazi ha n'oge mgbede, ha ga-anọ ọdụ. N'ihi ya, ụfọdụ n'ime ndị bi n'ebe dị anya agafewo n'alaka ụlọ ọrụ ahụ. Ka enwere afọ ofufo maka ọrụ ha, ndị ọrụ na-anabata ihe na-erughị ka ha ga-esi rụọ ọrụ yiri Ci Ji na enweghị ememme ezumike. Ihe choro oru a na - eme ka o siere ndi oru aru ike ichota ndi mmadu n'èzí. Nke a bụ eziokwu karịsịa banyere ndị bi n'ebe ahụ: ọrụ ha na ọrụ ha kewapụrụ ha site na ndị enyi ụlọ akwụkwọ ochie ha ma gbochie ha ịga ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ; ihe akaebe dịka ihe ha na-eyi na ihe ha na-ekwu banyere mkparịta ụka na-egosi na ndị ọrụ ahụ na-aghọ ndị dịpụrụ adịpụ dịpụrụ adịpụ. N'ihi ya, ha na-esonye n'ime Movement n'onwe ya. Ụfọdụ na-emesị bụrụ ndị nọn nke Movement.
O yiri ka enwere nkewa nke sitere na ezinụlọ na ndị enyi. Otu nwanyị, onye dị afọ iri atọ na otu, na-ekwu na o nweghi ohere ọ bụla iji hụ ndị enyi ya na ezinụlọ ya. N'ihi ịrụ ọrụ, ọ ghaghị ịrụ ọrụ site na Monday ruo Saturday, ọ na-arụkarị ọrụ na Sọnde. Ọ naghị echeta mgbe ọ gara leta ezinụlọ ya n'oge gara aga (Interview Personal).
E wezụga ịnabata nleta kwa ụbọchị nke Master Zhengyan, alaka ụlọ ọrụ dịka mpaghara mpaghara maka ọrụ ndị njem na nlekọta obodo. Na mbụ, nhazi nke ọrụ n'etiti alaka ụlọ ọrụ abụghị ihe efu; a na-ekewa ya na mbụ site na nwoke, afọ na nzụlite mmadụ. Ma, ebe enwere ọchịchọ siri ike maka mmekọrịta mmadụ na mkpa ọ dị iji kwalite ọrụ ndị ozi ala ọzọ, nkesa a na-ada mbà mgbe a na-ekewa ndị òtù maka ọrụ ụfọdụ.
Ndị otu mpaghara nwere ike iji alaka maka nzukọ. Ndị a dị n'ógbè a enwechaghị nnwere onwe. Ụlọ ọrụ Ci Ci na-enye otu isiokwu maka nzukọ ọ bụla. Ndị òtù ahụ n'onwe ha, n'enweghị onye ụkọchukwu, na-edu nzukọ, nzukọ ọ bụla na-ewe ihe dị ka awa abụọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, usoro a bụ: chanting nke Lotus Sutra maka ọkara otu awa; ntụgharị uche maka nkeji ise; akụkọ akụkọ; mkparịta ụka banyere isiokwu ahụ; na-agwụ site na mkparịta ụka ọnụ maka ọganihu nke usoro ahụ na ọdịmma nke Master Zhengyan.
Ọ bụ ezie na Zhengyan ekwuola na a maara nkuzi nke Buddha n'onwe ya, na Ci Ji bụ akụkụ nke omume Buddha nke ndị mmadụ, CiJi bụ eziokwu nke ọdịdị nke okpukpe Budhi, nke kachasị nso Rissho Kōsei-Kai. Ewezuga nkwurịta okwu ozizi a dị mkpa, Ci Ji na-echekwa ikpe ọha ọha na eze ike site n'aka ndị Taiwanese.
Ci Ji aghọwo onye a ma ama n'ụwa nile maka ọrụ ebere ya. Obodo dị na Taiwan, ọ bụghị ndị ọha na eze maara nke ọma maka mmetụta ya, nke kachasị bụ n'ihi akụ na ụba ọ kpatara site n'enye onyinye nke ụmụazụ ya. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị mgbasa ozi ekwupụtawo esemokwu, ọtụtụ n'ime ha esitela n'iji ego eme ihe n'ụzọ na-adịghị amasị ọha na eze, nakwa otú o si arụ ọrụ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ya.
N'ihe banyere ọrụ ọ na-arụ kwa ụbọchị, otu n'ime nnyocha Ci Ci bụ ịdabere na nkwenye na afọ ofufo. Jacob Tischer, onye nta akụkọ, katọrọ njirimara nke ntọala ya na nkwado nile nke òtù Zhengyan. O kwuru na a ga-edozi charisma a iji jide n'aka na ọhụụ nke nzukọ ahụ dịka Nna-ukwu Shengyan (聖 嚴), bụ onye dị mkpa maka onyinyo nke Dharma Drum ma na Taiwan ma n'èzí. Tischer jikwa ajụjụ banyere usoro Ci Ji nke ụlọ ọrụ akụ na ụba dị ka akụnụba akụ na ụba na-adabere na ndị ọrụ afọ ofufo, bụ ndị a pụrụ iwere dị ka "ọrụ dị ala na nke kachasị ụgwọ." A katọrọ oru ngo nke Neihu iji gosipụta omume ọzọ na Ci Ji Buddhism: na ịba mma nke ụmụ mmadụ na-abịa mgbe nile n'ihu gburugburu ebe obibi, dịka o mere na osisi recycling recycling nke Ci Ji. Tischer weghachiri nkatọ na arụ ọrụ Ci Ji na-agba ọsọ site n'aka ndị isi dị obere, ma kwuo banyere ọchịchọ ya nke 'ịchọrọ ka ndị otu n'ime ha na-adị n'otu, na-akụda nkatọ ma ọ bụ na-ekere òkè na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, introspection banyere nsogbu ime mmụọ, ihe mkpali zuru oke ịnakwere ikike , na-agbasawanyewanye na China - mee ka ọ siere Ci Ji dịka nzukọ na ndị òtù ya dị ka isiokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji kwado ọchịchị onye kwuo uche ya. "
Nkọwa dị elu Zhengyan na ihe omume ọha na eze mgbe ọ nabatara site n'igosi okpukpe bụ arụmụka, karịsịa mgbe Ci Ji ma ọ bụ ndị òtù ya metụtara. Otu ihe a ma ama bụ ihe ọjọọ mmanụ mmanụ nke Taiwan, bụ nke gụnyere Wei Yinchong, onyeisi oche nke Wei Quan Foods n'okpuru Ding Xin International Group. Ọ bụ onye na-eso Zhengyan, na-echekwa ebubo iwu mgbe ụlọ ọrụ ya rere mmanụ ndị na-akwa iko n'okpuru akwụkwọ Wei Quan. A tụrụ ya mkpọrọ afọ abụọ. Ọ bụghị Zhengyan katọrọ ya onwe ya. Kama nke ahụ, ọha na eze ghọtara na onye na-ekwuchitere Ci Ji na Zhengyan amaghị onye na-eso ụzọ ya ikpe, kama ọ bụ nkasi obi Wei site n'ịgba ya ume "iri nri nke ọma, hie ụra nke ọma." Ọhaneze nọ na-eche ma ozizi Zhengyan kachasị nkụzi na Wei bụ rịọ ya ka o tinyekwuo aka na ọrụ ebere na ime ihe ndị dị mma iji baara ọha mmadụ uru.
Mmekọrịta dị n'etiti Wei Yinchong na Zhengyan mere ka esemokwu dị n'etiti Ci Ji na ndị ọha na eze banyere ọrụ ikpe ziri ezi. Wei bụ onye ndú maka ìgwè nri nri na Ci Ji International International Aid Aid Aid Association. Enwere ike igosi mmekọrịta dị n'etiti Wei na Ci Ji site na akụkọ ndị Wei Quan Foods bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ahụ maka Ci Ji ma e mere atụmatụ na ha emepụtala iri atọ na pasent 40 nke nri Ci Ji. E kwuru na ụlọ ọrụ ahụ dabeere na Ci Ji maka ihe oyiyi ngwaahịa ya. Ọ bụ ezie na a na-ahapụkarị ndị mmadụ n'otu n'otu iji kpebie otú ha chere na onye ndú okpukpe kwesịrị isi zaa okwu ọha na eze, o yiri ka ndị na-elekọta ọha mmadụ hà nwere nchegbu banyere nchekwa ihe oriri ma chee na ọ bụ naanị na ụlọikpe iwu obodo ahụ ga-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ onye isi oche, n'enweghi ike ijide onwe ya site n'umu aha ya na Ci Ji.
Ngalaba na-ahụ maka ndị ọrụ na gọọmentị New Taipei City gọọmentị ekwuola na n’etiti ụlọ ọgwụ iri ise na asaa achọpụtara, achọpụtara na iri abụọ na asatọ emebila Iwu Iwu Ọru. Onye Ngalaba ekpughere Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taipei Alaka na 2014 ka o mee ka ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ gabigara ókè, ọrụ oge na-akwụghị ụgwọ. Achọpụtara Hospitallọ Ọgwụ Tzu Chi, ọ bụghị maka oge izizi, imebi iwu, n'etiti ụlọ ọgwụ ndị dị na mpaghara ahụ ga-akwụkwa nha kachasị mma nke Ngalaba nyere. A kọwakwuru akụkọ ndị ọzọ gbasara arụ ọrụ na Tzu Chi General Hospital na Hualian (花蓮) na 2016 site na Taiwan Medical Alliance for Labour Justice and Patient Safety, TMAL (台灣 醫療 勞動 正義 與 病人 安全 促進 聯盟), mgbe ha natara akụkọ site n'aka dọkịta nwanyị si Division nke Hematology & Oncology, bụ onye kwuru na ya ga-arụ ọrụ ụbọchị ise na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ oge na-adịghị anya ruo awa iri atọ na isii, mgbe nke a gasịrị, ọ dara ma nọrọ na coma ruo ọnwa isii, mana natara enweghị ụgwọ site n'ụlọ ọgwụ.
Foto #1: Dharma Master Zhengyan.
Image #2: Ụlọ nsọ ahụ Zhengyan hiwere na Hualian, nke Pumensi.
Foto #3: Isi ụlọ ọrụ mmegharị na Hualian, Taiwan.
Image #4: logo Ci Ci organisation.
** Ọ gwụla ma amaghi ya, Ihe maka profaịlụ a sitere n'aka Yao, Yu-Shuang, 2012. Tzu Chi Taiwan dị ka okpukpe Buddha kwadoro: Origins, Òtù, Ịgba Aka na Mmetụta Ahụhụ. Leiden na Boston: Global Oriental / Brill.
Zhengyan (Cheng Yen). 1996. Echiche Echiche II. Lin Chia-hui sụgharịrị ya. Douglas Shaw dere ya. Taipei: Echiche Echiche Cultural Mission Co., Nke Abụọ.
Zhengyan (Cheng Yen). 1993. Echiche M. Nke a na-edeziri site na Káo HsĪn-chiáng. Taipei: Tzu Chi Culture Publications.
Ya, Rey-Sheng, 2013. "Mentors Silent nke Tzu chi." Akwụkwọ akụkọ nke Oxford Centre maka Studies Buddhist 4: 47-74.
Huang, Chien-yu Julia, 2009. Charisma na ọmịiko: Zheng Yan na Buddha Tzu Chi Movement. Cambridge, MA: Mahadum Harvard University.
Jones, Charles Brewer, 1999. Buddha na Taiwan: Religion na State 1660-1990. Honolulu: University of Hawai'i Press.
Madsen, Richard, 2007. Dharma Democracy's Dharma: Ọganihu Okpukpe na Ọganihu Ndọrọ Ọchịchị na Taiwan. Berkeley: Mahadum California Press.
O'Neill, Mark, 2010. Tzu Chi: Ijere Ohu. Singapore: John Wiley.
Pen, Shu-chun, 1993a "Buddhist ọmịiko Tzu Chi Association." Pp. 196-99 na N'agbanyeghị nke Dharma Master Cheng Yen chere. Edere site na Kao Hsin-chiang. Taipei: Tzu Chi Culture Publications.
Pen, Shu-chun, 1993b. "Na-echegharị Ugwu Mgbe Ọ Na-aga n'Ugwu, na-echegharị mmiri mgbe ọ na-eche mmiri ihu: Akụkọ nke Dharma Master Cheng Yen." Pp. 210-36 na N'agbanyeghị nke Dharma Master Cheng Yen chere. Edere site na Kao Hsin-chiang. Taipei: Tzu Chi Culture Publications.